Home Wararka Farmaajo oo xabsi guriga ka saaray Xasan D. Aweys loona qaadayo dalka...
Farmaajo oo xabsi guriga ka saaray Xasan D. Aweys loona qaadayo dalka Qatar
Hogaamiyihii hore ee Ururka Xisbul Islaam Xasan Daahir Aweys oo hadda u xiran Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa laga saaray xabsi gurigii uu ku jiray iyadoo loo wareejiyay guri ku yaal KM4.
Dowladda Federaalka aya u ogolaatay dalka Qatar in ay la wareegaan Xasan Dahir Aweys oo ka mid ah aasaasayaashii ururka Al Shabab, balse kaddib markii ay is qabteen hoggaamiyihii hore ee Shabab Axmed Godane isku soo dhiibay dowladda, kaddibna diiday in uu ka noqdo oo uu cambaareeyo kooxda Shabab.
Qaar ka mid ah Ehalladiisa oo la hadlay MOL aya noo sheegay in Xasan Daahir Aweys uu aad ula taag yaran yahay cudurka QAAXADA (TB) waxaana dowladda ay ogolaatay in loo wareejiyo dalka Qatar si uu u helo daawo.
Arrintaan ayaa laga qariyay warbaahinta, balse dabagal iyo baaritaan dheer oo ay sameysay MOL ayaa lagu ogaaday in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ogolaatay in Xaaladda caafimaad daro ee iminka uu wajahayo Wadaadka Al-Shabaab ka soo baxsaday lala tacaalo loona duuliyo dalka Qatar oo horay u dalbadatay iney magan galyo siyaasadeed siineyso Xasan Daahir Aweys.
Xasan Daahir Aweys oo ka mid ahaa Saraakiisha Al-Shabaab ayaa diiday inuu ka tanaasulo fikirka uu u xiran yahay.